को’रोना भा’इरस कुन- कुन बस्तुमा कती दिन बाच्ने ? «
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७७, सोमबार ११:००
अस्ट्रेलियन शोधकर्ताहरूको एक अध्ययनले को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण गराउने भा’इरस नोट, फोनको स्क्रिन तथा स्टिलमा २८ दिनसम्म रहन सक्ने देखाएको छ।अस्ट्रेलियाको नेशनल साइन्स एजेन्सीको प्रयोगशाला अध्ययनले सा’र्स-कोभ-२ यी स्थानहरूमा सोचे भन्दा लामो समयसम्म रहने देखाएको हो। यध्यपी यो परीक्षण अध्यारो स्थानमा गरिएको थियो। यस्तै अल्ट्रा भ्वाइलेट प्रकाशले यिनलाई मा’र्ने यसअघि नै देखाइसकेको छ।
केही विज्ञहरूले वास्तविक जीवनमा यी सतहबाट हुने वास्तविक सं’क्रमणका बारेमा भने शं’का व्यक्त गरिरहेका छन्। को’रोना भा’इरस मुख्यरूपमा मानिसले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा बोल्दा सर्ने गर्छ। हावामा रहने कणहरूबाट सर्ने प्रमाणहरू पनि भेटिएका छन्।
यस्तै अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार भा’इरस रहेको धातु तथा प्लास्टिकजन्य सतहको सम्पर्कमा आएमा पनि यो सर्ने सम्भावना छ। यध्यपी यो धेरै कम अवस्थामा हुने गरेको छ। अध्ययनले के भन्छ ? अघिल्ला प्रयोगशालाका परीक्षणमा को’रोना सार्ने भा’इरसहरू नोट र सिसामा दुई देखि तीन दिनसम्म तथा प्लास्टिक र स्टिलमा ६ दिनसम्म रहनसक्ने देखाएको थियो। यध्यपी यसका परिणामहरू फरक हुनसक्छन्।
अष्ट्रेलियन शोधकर्ताहरूको अध्ययनमा भा’इरस मोबाइलमा हुने सिसा, प्लास्टिक र कागजको नोटमा कोठाको तापक्रम(२० डिग्री सेल्सियस)मा २८ दिनसम्म धेरै बलियोरूपमा रहने पाइएको छ। यसको दाँजोमा फ्लु’भा’इरस भने १७ दिनसम्म रहने अध्ययनले देखाएको छ। भा’इरोलोजी जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार को’भिड भा’इरस चिसोमा भन्दा धेरै तापक्रममा कम समय बाँच्ने गर्छ। २४ घण्टाको अवधिमा ४० डिग्री सेल्सियसमा तापक्रममा भने सो भा’इरस केही सतहहरूमा सं’क्रामक हुन ब’न्द हुने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ।
यो कपडा जस्ता झरझरा पदार्थहरू भन्दा चिल्लो, गैर-झरझरा सतहहरूमा पनि लामो समयसम्म रहने गरेको पाइयो जबकी कपडा जस्ता पदार्थहरूले १४ दिनपछि कुनै सं’क्रामक भाइ’रस बोकेको पाइएन। यो अध्ययनले आ’लोचना पनि खे’पेको छ। कार्डिफ विश्वविद्यालयको रूघाखोकी केन्द्रका पूर्व निर्देशक प्रोफेसर रोन एकल्सले यस अध्ययनको आ’लोचना गरेका छन्। उनले अध्ययनको भा’इरस २८ दिनसम्म जिवित रहन्छ भन्ने निश्कर्षले आम मानिसमा अनावश्यक त्रा’स फैलाउने बताउँदै आ’लोचना गरेका हुन्।
‘भा’इरस सतहमा खोकी र हाच्छिउँबाट आउने छिट्टा तथा फो’होर औंलाहरूबाट सर्छ र यो अध्ययनले ताजा मानव ख’कारलाई भा’इरस सं’क्रमण फैलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छैन’, उनले भने, ‘ताजा ख’कार भा’इरसका लागि प्रतिकुल वातावरण हो। यसमा भा’इरसना’शक एन्जाइमहरू बनाउने धेरै श्वेत कोषहरू हुनुकासाथै भा’इरसलाई तटस्थ बनाउने अन्य एन्टीबडी र रसायनसमेत हुनसक्छ।’ ‘मेरो विचारमा सं’क्रामक भा’इरस ख’कारमा केही दिन भन्दा पनि केही घण्टासम्ममात्र रहन्छ’, उनले भने।
जुलाईमा लान्सेन्टमा प्रकाशित रूटर्स विश्वविद्यालयका माइक्रो बायोलोजीका प्रोफेसर इम्यानुअल गोल्डम्यानको एक शोधपत्रमा ‘निर्जीव सतहहरूको माध्यमबाट प्रसारणको संभावना धेरै थोरै हुन्छ’ भनिएको थियो। उनले महत्वपूर्ण ख’तरा भनेको अध्ययनको संरचना वास्तविक जीवनसँग निक्कै कम निकट भएको बताए। गत साता युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी मेडिसिन प्रोफेसर मोनिका गान्धीले को’रोना भा’इरस सतहबाट नसर्ने बताएकी थिइन्।
मुन्धुमस्टार डटकम​- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्मारमा यो वर्ष भएको सैन्य कूको प्रतिक्रियास्वरूप म्यान्मारको सेनालाई हतियार आपूर्ति